Ururka ISIL oo baahiyay muuqaal sarkaal katirsan sirdoonka Russia uu qoorta ka gooyay - Horn Future
Syria -(Reuters)-Website ka lagu magacaabo( SITE) ee la socda dhaqdhaqaaqyada xagjirka ah ayaa sheegay maanta oo Salaasa ah in ururka ISIL uu baahiyay muuqaal video ah oo uu kasoo muuqday sarkaal ka tirsan sirdoonka Russia oo ay gacanta ku dhigeen xagjirka dalka Syria.
Dhinaca kale wax jawaab ah kama soo bixin wasaaradda difaaca ee Russia iyo waaxda amniga ee Federaalka.
Muuqaalkan video ga ah oo ku baxay afka-Russia oo socday 12-daqiiqo ah ayaa waxa la faafiyay maanta oo Russia ay u dabaal degaysay sanad-guuradii guushii ay ka gaadhay dagaalkii Nazi ga Germany ay la gashay sanadkii 1945.
Waxa kasoo muuqday video gan nin ku labisan dhar madow oo jilba-joogga lama-deegaan cidla ah oo ugu baaqaya in basaasiinta kale Russian ka ah ay is-dhiibaan.
Waxa lagu sheegay faallo maqal ah video gan ka hor intii uunan ku gowricin mindi nin xagjirka ah oo gadhle oo katirsan ururka ISIL taas oo lagu yidhi”waxa uu ka run sheegay doqonkan ballan qaadkii dowladiisa ee ahaa in aynan ka hadhi doonin hadii maxbuus ahaan loo qabsado,”.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in aynan u suurta galin inay xaqiijiso jiritaanka muuqaalkan la duubay ama aynan cadeeynayn goorta dilkani dhacay.
Ciidamada Russia ayaa waxa ay ku taageeraan hogaamiyaha Syria Bashar al-Assad dagaalka ka dhanka ah kooxaha macaaradka iyo xagjirka isku dayaya inay talada ka ridaan.
Muuqaalkan video ga ah ayaa waxa lagu soo bandhigaya qaybo tilmaamay saameeynta burburka duqeeymaha Russia ay ku hayso dalka Syria.
Wasaaradda difaaca ee Russia ayaa sheegtay in ku dhawaad 30 askari oo Russian ah lagu dilay Syria tan iyo markii Kremlin ku uu bilaabay hawlgalkiisa Syria bishii September 2015.
« Erdogan oo ku tilmaamay siyaasadaha Isra’iil ee ku wajahan Falastiinyiinta falal isir takoor ah	» Indonésie: Le gouverneur de Jakarta condamné à deux ans de prison